Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇြန္လ 29, 2020
LB အပြည့်အဝအမည်များနှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; Jorge Resurrección Merodio. ကျွန်ုပ်တို့၏ Koke ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှုရှေ့တော်၌မိမိအစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိကပါဝင်ပတ်သက်, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှထမြောက်ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက် Koke ဥရောပအစဉ်အဆက်တယ်ဟာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူ Xavi တစ်ဦးကိုဆက်ခံဖြစ်ပါတယ်သိတယ် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုမျက်စိ။
Koke- Xavi ရဲ့ဆက်ခံသူလို့တံဆိပ်ကပ်။ ခရက်ဒစ်မှ Teinteresa.es.
သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Koke ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များ Jorge Resurrección Merodio ဖြစ်ကြသည်။ Koke သူကိုမကြာခဏခေါ်တော်မူသည်အတိုင်း, သူ့အမိကားမစ္စ Merodio နှင့်သူ၏ဖခင်မက်ဒရစ်အတွက်အေသြကန်ယိုResurrección, စပိန်မှဇန်နဝါရီလ 8 ၏ 1992th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အောက်တွင် Koke ရဲ့မိဘများ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Koke ရဲ့မိဘများ, မိမိအ mum,, Mrs Merodio နှင့်အဖေမစ္စတာအေသြကန်ယိုResurrección။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
Koke Colonia က de los Taxistas, မက်ဒရစ်နှင့်စပိန်တိုက်စစ်မှူး၏မွေးရပ်မြေ, Alvaro Negredo မြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ရုံ 14 ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်ဘက်တွင်မက်ဒရစ်၏ဗဟို၏ကြောင်းကို၎င်း၏တစ်ဦးမြို့။
"Koke ရဲ့အဖေရဲ့နာမညျကိုကနေတရားစီရငျResurrección"အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနည်းလမ်းအတွက်အရာ"ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း" ... သင်အလွယ်တကူ Koke တစ်ရိုမန်ကက်သလစ်အိမ်ထောင်စုသို့မွေးဖွားခဲ့သည်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အဆိုပါအမည် "Koke"Koke ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူကနေအစပြုပေးသောရုံအမည်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Koke လူလတ်တန်းစားမိသားစုအိမ်ထောင်စုများထံမှဘဝကိုထွက်တော့တာပဲ။ ဖခင်အေသြကန်ယိုသည်သူ၏မိခင်သူမကသူမ၏ခစျြသား, Koke အပါအဝင်သူမ၏မိသားစုဝင်အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များကစောင့်ရှောက်ယူရရှိနိုင်မည်သူတစ်ဦးအိမ်အကူစဉ်မက်ဒရစ်တွင်တည်ရှိသည်စက်ရုံတစ်ရုံမှာအလုပ်သမားဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအမေနဲ့အတူကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခြင်း Young က Koke ။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
Koke ရုံသူ၏မိသားစုအိမျတျော၌တစ်ဦးတည်းကိုတက်မကြီးထွားခဲ့ပါဘူး။ သူကသုံးမောင်နှမတစ်အစ်ကိုနှင့်ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ မိမိအမောင်နှမတွေထဲမှာ Koke အမြဲလက်ျာဟာသူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလက်ထက် မှစ. နီးစပ်သည်သူ၏ကြီးမားသောအစ်ကိုမှဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင် Koke ရုံ6ခဲ့တဲ့အခြိနျမှာနှစ်ဦးစလုံးဟာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအအစ်ကိုဖြစ်သူနှင့်အတူ Koke ရဲ့ [လက်ဝဲ] အစောပိုင်းကာလ။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
နှစ်ဦးစလုံးကညီအစ်ကိုတွေတတိယမျက်စိဒါမှမဟုတ်ဘာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူမွေးဖွားလာမခံခဲ့ရ "တစ်ဦးကို Creative ဗီဇSanti Cazorla ကဲ့သို့ "အရာများစွာကိုမှတ်သားလောက်ကစားသမားများနှင့် ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား တောင်ပိုင်းစပိန်ကနေခဲ့ရသည်။
Koke သူအိမ်မှာသူ့အစ်ကိုနှင့်အတူကစားထားတဲ့ဘောလုံးဘောလုံးသို့အမှုအရာကိုပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ထွက်တော့တာပဲ။ သူတို့ကဒေသခံကွင်းတွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကစားနေစဉ်, နှစ်ဦးစလုံးကညီအစ်ကိုတွေ "ဖြစ်ခြင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုစရိုက်များပုံအောနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား"သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Koke နှင့်သူ၏ Big Brother ။ ခရက်ဒစ်မှ telecinco.es.
ကံမကောင်းစွာပဲ, က Colonia က de los Taxistas ၏ဒေသခံလယ်ကွက်မှာမိမိဘောလုံးနှင့်အတူတိုးတက်တဲ့သူမှသာ Koke ဖြစ်ခဲ့သည်။ Koke အားထုတ်မှုအက်သလက်တီကိုအကယ်ဒမီနဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းအပ်ဖို့ဦးဆောင်အရာသည်၎င်း၏ခွဲဝေပေးဆောင်။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဘောလုံးအဘို့အ Koke ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်၏အကယ်ဒမီသို့မအပ်နှံ 8 ၏အသက်အရွယ်မှာသူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… သူကဒဏ္ဍာရီနဲ့တှေ့ဆုံခဲ့အခါကလပ်နှင့်အတူ Koke ရဲ့အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများ လာ. , ဖာနန်ဒိုတောရက်စ် သူကို့တစ်နှစ် 2001 အတွက်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှအကြီးတန်းအဖွဲ့ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Koke အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝက။ ခရက်ဒစ်မှ အင်္ဂလိပ် AS - Diario AS.
Koke ရဲ့ကလပ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာရန်သူ၏ရှည်လျားသောရှာပုံတော်အတွက်တောရက်စ်မှဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ အလားအလာငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်, မိမိအိပ်မက်စေ steely ပြဌာန်းခွင့်စစ်မှန်တဲ့လာပိုင်တော်မူ၏။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအဖြစ်သူ၏အသက်အရွယ်အုပ်စုတို့တွင်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, အကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန် Koke ရဲ့ရည်မှန်းချက်တခုသွားတာဖန်စီအဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူး။
Koke ရဲ့အစောပိုင်း Years- သူကသူ့အသက်အရွယ်အုပ်စုတို့တွင်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ်မှ အင်္ဂလိပ် AS - Diario AS.
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
Koke အက်သလက်တီကိုနှင့်အတူရင့်ကျက်ဆက်လက်။ သူကသူ့ကိုယ်သူပဲအစာရှောင်ခြင်းတက်ကြီးထွားလာပေမယ့်အကယ်ဒမီအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ကောင်းစွာဖြေရှင်းမရကိုမြင်လေ၏။ Koke အသက်အုပ်စုများမှတဆင့်အေးချမ်းတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှအကြီးတန်းအဖွဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိပ်မက်တိကျစွာစက်တင်ဘာလ 19 ၏ 2009th နေ့၌စစ်မှန်တဲ့လာကြ၏။
လူငယ်တို့ Koke အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နှင့်အတူမြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ခရက်ဒစ်မှ TheHardTackle.
ထိုနှစ်တွင်ပင် 2009, Koke စပိန်အမျိုးသားရေးအသင်းအနာဂတ်ကြယ်ပွင့်အဖြစ်သူ၏နာမခိုင်မြဲ။ သူသည်ဖီဖာဦး-17 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာမိမိဦး-17 စပိန်အသင်းကိုတတိယနေရာ finish ကိုမှနျဆာပကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
အဆိုပါ 2012 / 2013 ရာသီတူသောအခြားအသိသာအတူ Koke မြင်သောစံပြရာသီခဲ့သည် Arda Turan ။ ယခုရာသီမှာတော့ Koke သည့်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှအကြီးတန်းကစားသမား၏မရှိမဖြစ်အင်္ဂါတခုအဖြစ်ထွက်ရပ်နေ၏။ ဤသည်ကိုသူ Copa del Rey ဖလားအနိုင်ရတဲ့အတွက်ဆာခဲ့ရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။
Koke ဟာ Copa Del Rey အနိုင်ရရှိမှု Fame- မှထလော့။ ခရက်ဒစ်မှ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်။
မိမိအအောင်မြင်မှုပြီးနောက် Koke ရဲ့တသမတ်တည်းအထင်ကြီး display တွေဆက်လက်နောက်တဖန်သူသည်မိမိကိုမိမိအမျိုးသားရေးနှင့်ကလပ်နှစ်ဦးစလုံးဘက်မှာဆာပဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤသည် Koke 21 အတွက်စပိန် U2013 ယူအီးအက်ဖ်အေဥရောပချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိသူ၏အသင်းဖော်ကူညီပေးခဲ့သည်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Fame ပုံပြင်မှ Koke ရဲ့လမ်းမ။ FourFourTwo မှ credit ။
ရုံတစ်နှစ်အတွက်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ 2014, Koke ရဲ့ထိပ်တန်းသွားတာနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စွမ်းရည်ဟာလာလီဂါခေါင်းစဉ်အနိုင်ရရှိသူ၏အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
Koke ရဲ့ LaLiga ဘုနျးတျောကို။ ခရက်ဒစ်မှ ပိန် SPORTS
မိမိအအမျိုးသားရေးအသင်းနှင့်အတူ Koke ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထွတ်အထိပ်အချိန်ရောက်လာသည် Xavi စပိန်ကစားသမားအနေဖြင့်အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအိုမင်းခြင်းကပိုရည်မှန်းချက်-အမှတ်ပေးအခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောစပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်ခြင်း Xavi Koke အမျိုးသားခြမ်းအပေါ်သူ၏ဆက်ခံစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Koke, Xavi တစ်ဦးကိုဆက်ခံကပ်ထားပါတယ်။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
"သူကထူးကဲသည် ... သူကစပိန်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဆက်ခံဖွစျလိမျ့မညျ"
ကပြောသည် Xavi။ အများအပြားဘောလုံး pundits အဆိုအရယင်း Koke သည်သူ၏ lookalike မိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်သူ့ကိုမြင်သူတစ်ဦးဒဏ္ဍာရီထံမှဆည်းပူးခဲ့သောအမြင့်ဆုံးကိုခြီးမှမျးဖြစ်ခဲ့သည်။ Koke လည်းသူ့မိသားစုနှင့်ချစ်ရသူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသူ၏စာချုပ်တိုးချဲ့သောမိမိကလပ်အပါအဝင်ကသူ့ရွယ်တူ၏ဂေဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရရှိခဲ့သည်။
Koke Fame ပုံပြင်မှထလော့။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
ရုံနဲ့တူ ဖာနန်ဒိုတောရက်စ် မိမိအဆရာ, Koke ရဲ့အလိုတော်အမြဲတစ် Athletico Madrid အသင်းဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ကိုအောက်မေ့ရမည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
အဘယ်သူမျှမချော, သစ္စာရှိမှု, ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်နှိမျ့ခခြွငျးမြားပါဝငျရာ Koke ရဲ့နှစျလိုဖှယျအရည်အသွေးတွေသူ့ကို Darling ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စေမည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိပါသည်။ အောင်မြင်စွာစပိန်နောက်ကွယ်မှ, Beatriz Espejel ၏လှပသောလူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖျားခါရှိနေပါသည်။
Koke ရဲ့ WAG- Beatriz Espejel ။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
As Fabwag ဒါကြောင့်ကိုထည့်လေ့မရှိ, Beatriz မစ္စတာမှ Beatriz Espejel Jimenez နှင့်မစ္စဖေလဇ်မင်း Espejel Munoz အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမလည်းသူမသောသူကဲ့သို့ဘောလုံးကစားသူသည်ဒါဝိဒ်အမည်ရှိညီငယ်ရှိပါတယ်။ ဤအချက်ကိုဖြစ်ကောင်းသူမနှင့် Koke တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုရှင်းပြသည်။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Beatriz လက်ရှိအယ်လ်ဘာနီ School မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်သူအင်္ဂလိပ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ သူမလည်းတက်စေခြင်းမရှိဘဲမော်ဒယ်တစ်ဦးထူးချွန်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Koke ရဲ့ Wife- Beatriz Espejel, မိတ်ကပ်မပါဘဲ & Models ။ Instagram ကိုမှအကြွေး
သူမကစပိန်ဖြစ်သော်လည်း Beatriz ရဲ့အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်သူမက Universidad Complutense က de မက်ဒရစ်ထံမှ 2010 အတွက်ရရှိသောအရာပညာရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားကိုသင်ကြားရေးအတွက်သူမ၏နှစ်ဆဒီဂရီကြောင့်ရောက်လာတယ်။
Koke နှင့် Beatriz Espejel နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးမြင့်မားစိတ်ခံစားမှုအခမ်းအနားကိုခေါ်ခဲ့ရာလက်ရှိတွင်လက်ထပ်သည်။ သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှတရားစီရငျ, နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများမေလ 2018 န်းကျင်လက်ထပ်တယ်။
Koke မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ။ Instagram ကိုမှအကြွေး
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, Beatriz နှင့် Koke အက်သလက်တီကို၏အရှိဆုံးထူထောင်စုံတွဲများ၏တဦးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ နွေရာသီများအတွက်စုံတွဲရဲ့အကြိုက်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့တစ်ခုမှာ Ibiza ၏စပိန်ကျွန်းနှင့်ရေကိုဖြစ်ပါတယ်။
Koke သီချင်း Love Story ။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
အထက်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း Espejel "ဟုသူမကသူမ၏ခေါ်ဆိုဘယ်သူကို Koke နှင့်အတူစူပါချစ်ခင်ဖြစ်ပါသည်မင်းသား"။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
အဘယ်အရာကို Koke tick စေသည်?
ပြန်ထိုင်နေကျွန်ုပ်တို့ကသင်နှင့် ပတ်သက်. မသိစေခြင်းငှါ, Koke ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကိုအဖြစ်ဖြေလျော့။
Koke ကိုယ်ပိုင်ဘဝက။ Instagram ကိုမှအကြွေး
ချွတ်စတင်ကာ Koke လွတ်လပ်ရေး၏အတွင်းစိတ်ပြည်နယ်, သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌တိုးဖို့သူ့ကို enabled သည့်တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သည်။ သူကစည်းကမ်း, တာဝန်ရှိသည်နှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်နှင့်သူ၏နေ့စဉ်အသက်တာရေးရာများတွင်အချိန်နှင့်တာဝန်သက်ဆိုင်သူအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
Koke သူ့မိဘအဖြစ် Vallecas သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်-class ကိုစပိန်အသိုင်းအဝိုင်းအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်။ မိမိစကားသည်အတွက်သူ၏မိသားစုနှင့်ရပ်ရွာနှိမ့်ချဖြစ်ကြပြီးတန်ဖိုးကိုအများကြီးရှိသည်သောအလုပ်လုပ်နေလူတန်းစားလူများကိုတက်လုပ်နေကြသည်။
Koke ၏မိဘများသည်သူတို့သားသို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ဓာတ် instilling ၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ရှိနေခြင်းမှာရှိပါတယ်။ ယနေ့နှစ်ဦးစလုံးအမြိုးသားတို့ကသူတို့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလွန်အောင်မြင်သောဖြစ်လာကြပါပြီ။
Koke ရဲ့မိသားစုဘဝ။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
သူ့မိဘအဆင်ပြေနေဖို့သေချာအောင်ဖို့ Koke ရဲ့ဆည်းကပ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အားမိမိကတိကဝတ်ဆင်တူသည်။
"ငါသည်သူတို့လိုအပ်သမျှပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါကမက်ဒရစ်အတွက်အိမ်ကြီးပါဝင်သည်။ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်နှင့်သူမ၏နာကျင်ကိုက်ခဲအဆစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ငါ့အမိအဘို့အရိုးအကြောအဆစ်များအတွက်ကားများဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့လိုအပျသောအရာကိုအကြှနျုပျကိုပြောပြခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့အဘို့ပြုလုပ်ပေးဖို့လမ်းကိုရှာပါ။ "
Koke ရဲ့အဘိုးအဘှား။ Instagram ကိုမှအကြွေး
မောင်နှမ: သူ့မိဘနှင့်အစ်ကို Asides, နည်းနည်း Koke ရဲ့အစ်မတွေအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူမှသီးများစွာသီးတတ်ကြောင်းရှင်းပါတယ် သူတို့အပျေါမှာမဆိုမီးမောင်းထိုးရှောင်ကြဉ်ပါ။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
Koke ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့သိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ကာ Koke တော်တော်လေးအထင်ကြီးကားများ, အရက်များခြင်း, swagger နှင့်တော်တော်လေးမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာသည့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာလူနေမှုပုံစံနထေိုငျသော Millionaire ဘောလုံးသမားအမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုအရ SillySeason, တစ်ပတ်ကို Koke လုပ်ခ£ 192,308 န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်သူ၏နှစ်စဉ်လစာ£ 10,000,000 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေနေသော်လည်း Koke သူ၏ဇနီးနှင့်အတူအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်ပါတယ်။
Koke ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့။ Instagram ကိုမှအကြွေး။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
ဒါဟာအားလုံးတစ်ကံကောင်းညနေပိုင်းတွင် Koke တစ်ချိန်က Chamberi အတွက်မက်ဒရစ်ကားတစ်စီးပန်းခြံ (မက်ဒရစ်၏အလယ်ပိုင်းခရိုင်) တွင်သေနတ်မှာလုယက်ခံခဲ့ရနေ့ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တခုတခုအပေါ်မှာလက်နက်ကိုင်ဓားပြမိမိပိုင်သောတောင်းဆိုသူ့ကိုမှာသေနတ်ထောက်ပြတဲ့အခါမှာသူကသူ့ကားထဲတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးတာနဲ့ဂွန်ပွိုင့်မှာလုယက် Koke- ။ ခရက်ဒစ်မှ အဝတ်အချည်းစည်းလုံခြုံရေး - Sophos.
Koke သတင်းများအရ $ 77,000 တန်ဖိုးသည်သူ၏ဖန်စီလက်ပတ်နာရီရှိသည်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံသူသေနတ်သမားနှင့်အတူ corporated ။ Koke မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရန်အတွက်သူခိုးရန်လက်ပတ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သူကအားလုံးတစ်ခုမှာ မှလွဲ. Won ထားပါတယ်:
Koke ရဲ့နေဆဲချန်ပီယံလိဂ်အနိုင်ရစောင့်ဆိုင်း။ ခရက်ဒစ်မှ UEFA.com နှင့် ဇီးသတင်းများ.
Koke ဥရောပကလပ်ဘောလုံးအတွက်ဘုန်းကြီးသောအများဆုံးဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရာတစျခု မှလွဲ. အက်သလက်တီကိုမှမရရှိနိုင်တိုင်းတတ်နိုင်သမျှခေါင်းစဉ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Koke ကစားနှင့်၎င်း၏ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်နှစ်ခုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရာသည်၎င်း၏ချန်ပီယံလိဂ်။
Koke ရဲ့မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုနာမည်ရဲ့စပိန်အကောက်ခွန်မှအပေါ်ကိုင်ထားပါ။ Koke ရဲ့တစ်ဦးအလယ်နာမည်ရှိပါတယ်, Merodio ကသူ့မိခင်ရဲ့အခြမ်းကနေလာပါတယ်။ ဒါဟာသူ့မိခင်အေသြကန်ယိုလက်ထပ်ရတဲ့မတိုင်မီသူမ၏မိသားစုထံမှခဲ့တဲ့အမည်သစ်ကိုရသော။
Koke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
အောက်တွင်ဒီပရိုဖိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်ကိုရှာဖွေပါ။ ကြင်နာစွာသွားရောက်နဲ့ SUBSCRIBE ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် Youtube ကို Channel ကို နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Koke ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Ferran Torres ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Marcos Llorente ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Mariano Diaz ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Achraf Hakimi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Dani Olmo ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Daniel Parejo ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Rodrigo Moreno ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Adama Traore ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Ansus Fati ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရိုဒရီဂိုဟာနန်ဒက်ဇ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဖာနန်ဒို Llorente ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Jordi Alba ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်